जब डा‍. केसी अनसनरत अस्पताल रणभूमि बन्यो... ::Nepali TV
You are here : Home News जब डा‍. केसी अनसनरत अस्पताल रणभूमि बन्यो...
जुम्ला — बुधबार साँझ सरकारले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत प्राडा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लाने निर्णय गरेसँगै डा. केसीका समर्थक र डा. केसी स्वयंलाई सरकारले आफ्ना मागहरुलाई तुहाउने षड्यन्त्र गर्न थालेको भन्ने लागेको थियो ।
बिहीबार एकबिहानै म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठाको दोस्रो तत्लामा रहेका प्राडा. केसीलाई भेट्न पुगेको थिएँ। डा. केसीको मुटुको चाल तलमाथि भैरहेकाले चिकित्सकहरुले उहाँलाई बोल्न नहुने सुझाव दिइरहेका थिए।
सरकारले अघिल्लो साँझ गरेको निर्णयको खबर पाएकाले मसँग केही कुरा गर्न चाहिरहेका थिए। डा. केसीलाई काठमाडौं लैजाँदै छ रे भन्ने सुनेर उनलाई भेट्न आउनेको पनि घुइँचो थियो। उनले आफ्ना सहयोगीलाई आँफूले केही बताउन चाहेकोले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई बाहिर पठाइदिन आग्रह गरेका थिए।
‘पत्रकार देखेपछि धेरै कुरा बोल्ने मन लाग्छ म उत्तेजित हुन सक्छु त्यसैले सबैजना वाहिर गइदिनुहोस्। मेरा सहयोगीले मैले बोलेको अडियो तपाईंहरुलाई दिन्छन्,’ भनेपछि त्यहाँ भएका सबै सञ्चारकर्मी र उनलाई भेट्न गएका समर्थकहरु बाहिर निस्कीएका थियौं।
डा. केसीले आफ्नो अडियोमा भनेका थिए– ‘सरकारले मलाई अपहरण गरेर काठमाडौं लैजान खोज्दै छ। यदी सरकारले मेरो चिन्ता गर्ने हो भने मेरा मागहरु पुरा गरिदिए पुग्छ। माग पुरा हुनासाथ म यहीबाट अनसन तोड्न तयार छु। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चन्दननाथ बाबाको यो पवित्र भूमिमा अनसन बस्न पाउँदा म खुसी छु। मेरो सत्याग्रह जारी रहन्छ। यहाँका चिकित्सकहरुले दिएको सेवा प्रति म सन्तुष्ट छु।’
डा. केसीले यति भनेपछि उनका समर्थकहरुलाई पनि हौसला मिलेको थियो। उनले जुम्लाको पवित्र भूमिबाट नजाने भनेपछि स्थानीयहरु पनि उनको समर्थनमा अस्पताल पुगेका थिए। बिहान करिव साढे ९ बजे तिर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सेनाको ब्यारेक भित्र अवतरण गरेपछि स्थानीयको उपस्थिति अस्पताल परिसरमा बाक्लो भयो। डा. केसीका समर्थकहरुहरु अस्पताल बाहिर नाराबाजी गरिरहेका थिए भने भित्र विद्यार्थीहरु डा. केसीलाई राखिएको दोस्रो तल्ला जाने बाटोको सिँढिमा बाटो छेकेर बसीरहेका थिए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीसहितको टोली अस्पताल परिसर भित्र प्रवेश गर्दा बाहिर स्थानीयले नाराबाजी गरिरहेका थिए। मन्त्रीहरुको टोली अस्पताल भित्र गएर डा. केसी भएको ठाउँसम्म जानका खोजेका थिए।
उनीहरु पहिलो तल्लामै करिव १५ मिनेट जति बसेका थिए। सिँढिमा विद्यार्थी र डा. केसीका समर्थकहरु बसेकाले उनीहरु भित्र जान पाएनन्। डा. केसीसँग रहेका उनका सहयोगीसँग पनि नभेटी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्लेसँग छलफलमा बसेका थिए। डा. केसीका विषयमा गोप्य छलफल पछि सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीसहितको टोलि अस्पतालबाट फिर्ता भएको थियो।
अस्पताल परिसरमा मुख्यमन्त्रीलाई हामीले प्रश्न गर्दा उनले आफूहरु डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि काठमाडौं लैजान र उनको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझ्न जुम्ला आएको बताएका थिए। ‘उहाँ जन्न भन्नुहुन्छ र उहाँका समर्थकहरुले जान दिँदैनन् भने हामीले केही भन्नु छैन। बाँकी संघीय सरकारको विषय हो,’ भन्दै बाहिर निस्किएका थिए। त्यसै क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले सरकारी वार्ता टोलीलाई समेत भित्र प्रवेश गर्न नदिनु उचित नभएको बताएका थिए।
स्थानीय र डा. केसीका समर्थकहरुले कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई २० दिन पछि किन आएको भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए।
मन्त्रीहरुको टोली अस्पताबाट फिर्ता भएपछि थप प्रहरीको घेरा अस्पतालमा बढाइयो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढ्दै गयो। प्रहरीले थप बल अस्पतालमा पुर्‍याएपछि एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरको नेतृत्वमा प्रहरीले अस्पतालको गेटमा रहेका चिकित्सक र विद्यार्थीहरुमाथि लाठी बर्साएको थियो। लाठी बर्साउँदै जबरजस्ती प्रहरी अस्पताल भित्र प्रवेश गरेको थियो।
पत्रकारहरुलाई समेत भित्र छिर्न दिएका थिएनन् सुरक्षाकर्मीहरुले। केही प्रहरीहरु सिभिलमा पनि भित्र गएका थिए। त्यही हुलमुलमा म र एपीवान टेलिभिजनका प्रकाश उपाध्याय पनि भित्र पसेका थियौं। त्यसपछि प्रहरीले जथाभावी लाठी बर्साउन थालेपछि बिरामी, कुरुवा, कर्मचारी, चिकित्सक र विद्यार्थीहरुको भागाभाग भएको थियो।
प्रहरीले भुइँतलमा रहेको इमेरजेन्सी, सुत्केरी वार्ड हुँदै पहिलो तल्लामा पुगेको थियो। पहिलो तत्लाबाट दोस्रो तल्लामा जाने सिँढिमा बसिरहेका विद्यार्थीमाथी लाठी प्रहार गरेपछि विद्यार्थीहरुले पनि माथिल्लो तलामा रहेको सामान तल फालेका थिए। प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडपको अवस्था आयो त्यसैबेला अश्रुग्यासको पनि प्रयोग भयो।
दोस्रो तल्लामा विद्यार्थी र डियूटीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई लाठी बर्साइरहेको बेला मैले फोटो खिचिरहेको थिएँ। सिभिलमा रहेको पुलिसले मेरो क्यामरा खोस्दै ज्यान मार्ने धक्की दिए। आफूहरुको फोटो खिचेको भन्दै प्रहरीले ढाड र खुट्टामा समेत लाठीले हाने। त्यसैबेला एपीवान टेलिभिजनको लोगो फुटाल्दै दोस्रो तल्लाबाट खिचिरहेका प्रकाश उपाध्यायको पनि क्यामरा खोस्न खोजियो उनको हातमा लाठी लागेर बुम माइक र टेलिभिजनको लोगो फुट्न पुग्यो।
अस्पताल भित्र बिरामी भएकाले शान्त हुनुपर्ने ठाउँ एकाएक युद्धभूमि जस्तै देखियो। प्रहरीको हातमा लाठी, रड र घन थियो भने विद्यार्थीहरु आफ्नो नजिक जे सामान छ त्यहीले प्रतिकार गरिरहेका थिए। त्यसै क्रममा बिरामीहरु राखिएको वार्ड तिर पनि गएर प्रहरीले डियूटिमा रहेका चिकित्सक र विद्यार्थीमाथि लाठीचार्ज गर्‍यो। बिरामीका कुरुवा र बिरामीकै भागाभाग भयो।
अश्रुग्यास भित्र पसेपछि अक्सिजन लगाएर उपचार गरिरहेका बच्चा बिरामीहरुलाई अर्को वार्डमा चिकित्सकहरुले सारेका थिए। त्यही क्रममा प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलायो र त्यही गोली लागेर सिभिलमा भित्र छिरेका प्रहरी जवान कमल आचार्य घाइते भए। त्यसैबेला अस्पताल भित्रको अर्को वार्ड जाने गेटको सिसा पनि फुट्यो। एसपीको छातिमा चोट लागेपछि प्रहरीले पुन: बल प्रयोग गर्‍यो।
अस्पतालका झ्यालका सिसाहरु पनि फुटाएर बाहिर निस्कने प्रयास प्रहरीले गरेको थियो। दाहिने छातिमा चोट लागेका आचार्य भने रगत बगिरहेको भन्दै बिरामी राखिएको वार्डको स्टाफ नर्सको स्टेशनमा गएका थिए। स्टाफ नर्सहरु त्रसित भएर उनको सामान्य उपचार गरे।
त्यसबेलासम्म उनी उभिएकै थिए। त्यसैबेला सामान्य गज, प्याडले बेटाडिन लगाइरहेका थिए नर्सहरु। म त्यही पुगेर के भएको हो भनी सोधें र फोटो पनि खिचें।
उनले ‘चोट लाग्यो’ मात्रै भन्न पाए त्यसपछि उनी त्यहीँ ढले। त्यहाँ रहेका चिकित्सकहरुले उनको उपचारका लागि वार्डमा राखे। दाहिने छातीमा प्वाल परेको थियो। एक्सरे गर्दा उनको मुटुमा फलामको टुक्रा देखिएको थियो। हेर्दा गोलो देखिएकोले गोली नै हुनुपर्ने चिकित्सकहरुले अनुमान लगाएका थिए।
दाहिने छातिबाट भित्र छिरेर देब्रे छातिमा सिसा वा किला पुग्न नसक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताए। उनको शल्यक्रियाको समेत प्रयास गरियो। उनलाई धेरै रगत चाहिने भएकाले अन्नपूर्ण पोष्टका जुम्ला संवाददाता नन्दराम जैसीले समेत एक पिन्ट रगत दिएका थिए।
उनको अवस्था गम्भिर भैसक्दा पनि प्रहरीले उनको खोजी गरेन। के हुने, के भयो भन्ने पनि जानकारी दिन सकेन। सबै मिडियामा गोली चलेको खवर आएपछि गोली नचलाएको प्रहरीले दाबी गरेको थियो। विद्यार्थी र डा. केसीका समर्थकहरुले हानेको सिसा र किला लागेर घाइते भएको प्रतिक्रिया दिए। तर त्यो गलत थियो।
दिन भर तनावग्रस्त बनेको अस्पतालमा प्रहरी केही समयका लागि फिर्ता भयो। थप प्रहरी बोलाएर अस्पताल परिसरमा जुम्लाका डिएसपी तपनकुमार दाहालले माइकिङ गरे। ५ मिनेटको समय दिएर सबैलाई अस्पताल परिसरबाट बाहिर निस्कन उनले आदेश दिए।
‘कर्फ्य लागिसकेको छ। हाम्रो साथीको मृत्यु भइसक्यो अब हामी गोली चलाउछौं,’ भन्दै अस्पतालमा जम्मा भएका स्थानीयलाई बाहिर पठाउने काम गरियो। त्यसपछि प्रहरीले जबरजस्ती गरेर डा. केसीलाई अस्पताल बाहिर ल्याउन प्रहरी सफल भयो। डा. केसीलाई एम्बुलेन्समा राख्नु अघि डा. केसीले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गरेका थिए।
‘राज्यले मेरो अधिकार हनन् गर्‍यो। मैले जुम्लामा नरसंहार भएको देख्न सकिन। अस्पताल भित्रै प्रहरीले विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर गोली चलायो भाग्यवस त्यो गोलि विद्यार्थीलाई नलागेर प्रहरीलाई नै लाग्यो। म यहाँ बसिरहें भने धेरै जुम्लीको ज्यान जाने भयो। अस्पतालमा पनि धेरै क्षती पुर्‍याएको छ। त्यही भएर म काठमाडौं जान तयार भएँ। म भोलीको जहाजबाट काठमाडौं जान्छु भन्दा समेत नमानेर अस्पतालमा पुन: गोली चलाउने भनेपछि म बाध्य भएँ,’ उनले भने।
उनका गह भरिएको थियो। त्यही बेला स्थानीय महिलाहरुले उनलाई फुलको माला लगाएर बिदाई गरे । प्रहरीले बल प्रयोग गरेर स्कर्टिङ गर्दै नेपाली सेनाको ब्यारेक भित्र लगेको थियो। ब्यारेक भित्र रहेको हेलिकप्टरमा नउड्दासम्म विद्यार्थी र उनका समर्थकले डा. केसीको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेका थिए।
सुर्खेत पुग्नासाथ मुख्यमन्त्रीले आन्दोलनमा सहभागी सबै अस्पतालका चिकित्सक, विद्यार्थी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए। त्यही निर्देशन अनुसार राति साढे ११ बजे प्रहरी सिसिटिभिको फुटेज लिनको लागि अस्पताल पुगेको थियो। म पनि त्यहाँ पुगें। तर प्रहरीले फुटेज लिने मेसो पाउन सकेन्।